Ukuhamba komoya kuyanda eSpain: kulungile kumaxabiso abakhenkethi | Ezezimali
Wonke umntu uyazi ukuba ukhenketho lushishino lokuqala kwilizwe lethu. Ngaphandle koku, akukho kumelwa okunamandla kakhulu ngamaxabiso ahambelana neli candelo lifanelekileyo kuqoqosho lwesizwe. Kuzo zonke iinkampani ezidwelisiweyo zi-AENA, IAG, Vueling, NH Hoteles, Sol Meliá kunye neAmadeus. Oko kukuthi, ngabameli abathandathu kuphela abadweliswe kwimakethi kazwelonke eqhubekayo kwaye ngaphandle kobunzima obuthile kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Inani elingangqinelaniyo neMveliso yaseKhaya ePheleleyo (GDP) igalelo kwicandelo lezokhenketho kuqoqosho lwelizwe lethu.
Ngayiphi na imeko, indlela abaziphethe ngayo ezi stocks khange ibengazinzanga ngakumbi. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, babonise imeko engalinganiyo kulowo nalowo kubo. Nangona elona libonelela ngolindelo olukhulu lokukhula lichanekile ngokuchanekileyo UAENA esele ibonile ukuba kwezona ntsuku zimbi kwiimarike zezabelo izabelo zayo zixabiseke kancinci. Akumangalisi ukuba yimarike yesitokhwe ebekwindlela ecacileyo yokunyuka ukuya kwiinyanga ezininzi kwaye yonke into ibonakala ibonisa ukuba izakuhamba kwicala elinye ukusukela ngoku.
Kwelinye icala, idatha yezithuthi zomoya eSpain bezilungile. Into ekufuneka ibe nefuthe elihle kwixabiso labakhenkethi kwii-equities zesizwe. Kodwa impembelelo yayo ibingeyiyo idinomineyisi yayo eqhelekileyo kwezi ntsuku zokurhweba. Nangona ubuncinci, banelungelo lokuba abangawohlwaywa ngumthetho wobonelelo kunye neemfuno kwiimarike zezemali. Kunokutshiwo ngokukhuselekileyo ukuba beye kwiimeko ezininzi ezinye zezona zizinzileyo ekumiseni amaxabiso abo.
1 Amadeus: okuninzi ukuthenga
2 Iihotele ezibi kakhulu kwicandelo
3 Ukutsala umphandle ebhegini
4 Abakhweli bonyuswe nge-6%
5 Ukusebenza kwizikhululo zeenqwelo moya
Amadeus: okuninzi ukuthenga
Elinye lamaxabiso kunye nomgangatho wobugcisa obubalaseleyo liziko eligcinelwe abakhenkethi, elibonisa utyekelo lokujonga phakathi komda kunye nokunyuka. Nangona kuyinyani ukuba kubi kwiiveki ezidlulileyo, kodwa iseyithuba lokuvula izikhundla zexesha eliphakathi. Ngamandla okuhlaziya asesondele kakhulu kwi-10% nangaphezulu kwamanye amaxabiso kwicandelo lezokhenketho lesizwe. Ngomgca ozinzileyo weshishini ovumela abatyali mali abancinci nabaphakathi ukuba babe nethemba elikhulu. Phakathi kwezinye izizathu, kuba ayaphulanga nayiphi na inkxaso yokuhambelana okukhethekileyo.
Ngelixa kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba u-Amadeus ubhengeze umanyano oluqhubekayo lokuphucula i-NDC ngophuhliso, ukuvavanywa kunye nokwazisa ngemarike kokunikwa kwemixholo emitsha, efana neephakeji ezintsha zeenkampani kunye neerhafu zephakheji enamandla. Ezi mveliso zintsha ziya kuvumela abathengi ukuba benze uhambo lwabo olumanyeneyo kunye neenkonzo ezinje ngokufikelela kuqala, ukungena kwempahla, ukungena kwiKlabhu yaseUnited kunye nezinye ezininzi, zonke zinxulunyaniswe nokubhukisha kwabathengi kwifomathi yexabiso ngexabiso elincitshisiweyo.
Iihotele ezibi kakhulu kwicandelo
Ngokuchasene noko kuyenzeka ngecandelo lehotele elingagqibi ukuqala ngaphandle kwedatha elungileyo kukhenketho oluphumayo nolungenayo. Ukuza kuthi ga kwezi veki babone ukuba lixabiso lezabelo zabo njani behlile, kwezinye iimeko ngamandla amakhulu. Ukuba kuyo nayiphi na imeko ibandakanyeka kwi-downtrend ebhengezwe kakhulu kunye nomngcipheko ocacileyo wokuba bayaqhubeka ukwehla ukusukela ngoku. Kuba uxinzelelo lwabathengisi lomelele kakhulu kunolo lwabathengi. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuvavanya kula maxesha achanekileyo ukuba Ingeniso yeqela iyonke Iihotele ze-NH ikhule nge-4,6%, ifikelela kwi-822 yezigidi ze-euro, eqhutywa ngumsebenzi olungileyo kuyo yonke imimandla ye-Yuropu kwaye intle ngakumbi eSpain. Apho inkampani inyusa umvuzo wayo ophakathi kwigumbi elifumanekayo (i-RevPAR) nge-5,3%, ngenxa yokuphakama ngokupheleleyo kwixabiso eliphakathi, elikhula nge-4,7% ukuya kwi-102,3 yezigidi zeerandi ngaphandle kokuchaphazeleka kwinqanaba lokuhlala, okwangoku elingu-0,5% . Ngedatha engakhange ichaphazele ixabiso layo.
Ukutsala umphandle ebhegini
Le moya yenye yexabiso eye yaba yenye yezona zingaziwayo ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle kokuphakama okwenzeke ngaphezulu kweminyaka embalwa eyadlulayo kwaye yenye yeenkwenkwezi zamashishini eSpain. Emva kweli xesha lobungangamsha, ilahlekelwe ngumdla omkhulu phakathi kwabatyali mali kwaye ngenxa yoko ihambisa izihloko ezimbalwa kuzo zonke iiseshoni zokurhweba. Ngendlela esezantsi ephawula ixabiso layo kwiimarike zokulingana kwezi ntsuku. Apho kungalindelwanga ukuba inokwenza ngcono ngakumbi ngaphandle kweziphumo ezilungileyo ezibonisiweyo zizithuthi zomoya, ikhulile eSpain kwezi nyanga zidlulileyo.
I-Vueling, kwelinye icala, inqwelomoya ehamba phambili kwisikhululo seenqwelomoya i-Barcelona, ​​ibhiyozela namhlanje enye yezona zinto zibalulekileyo ezifezekisiweyo kwiminyaka elishumi elinesithathu yembali, ihambisa abagibeli abayi-100 yezigidi kwisikhululo senqwelomoya i-Barcelona-El Prat, "ikhaya" layo. Ukubhiyozela lo msitho ubalulekileyo, inkampani ihlawule irhafu kwisixeko sayo kunye nesiseko sayo esiphambili ngokuhombisa inqwelomoya ngegama elithi 'Vueling uyayithanda iBarcelona', ukusukela namhlanje izakubizwa ngegama leBarcelona kwiindawo ezingaphezulu kwe-130 esebenza kuzo kulo lonke elaseYurophu, eMntla Afrika nakuMbindi Mpuma. Yinqwelomoya yeAirbus A320 eyinxalenye yeenqwelo moya eziyi-108 kwizithuthi zeVueling.
Kule meko ngokubanzi, akukho mathandabuzo ukuba zininzi izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ezinikezelwa ngokhuseleko lweli candelo loqoqosho lwaseSpain. Ngegumbi elincinci lokuqhuba kwicala labatyali mali abancinci nabaphakathi ukusukela ngoku. Kwaye oko kuguqulela ekubeni kwehle kakhulu kulindelo lwabo kwimarike yemasheya. Ngaphandle kwento enokwenzeka kwimeko yokutshintshiselana kwihlabathi liphela. Kwaye inokuthatha ixabiso layo kwiiseshoni ezilandelayo kwimarike yemasheya.
Ukuba kuyo nayiphi na imeko ibandakanyeka kwi-downtrend ebhengezwe kakhulu kunye nomngcipheko ocacileyo wokuba bayaqhubeka ukwehla ukusukela ngoku. Kuba uxinzelelo lwabathengisi lomelele kakhulu kunolo lwabathengi. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Abakhweli bonyuswe nge-6%
Izikhululo zeenqwelo moya ezikwi-Aena network zibhalise ngaphezulu kwesigidi se-16 sabakhweli ngoFebruwari, i-6,4% ngaphezulu kunangoFebruwari 2018. Ngokukodwa, inani labahambi lilonke lalingama-16.258.832. Kwezi, i-16.202.154 ihambelana nabakhweli bezorhwebo, apho i-10.561.910 ihambe ngeenqwelomoya zamanye amazwe, i-6,3% ngaphezulu kunangoFebruwari 2018, kwaye i-5.640.244 yenze njalo kwiinqwelomoya zesizwe, i-7,1% ngaphezulu.
Isikhululo senqwelomoya UAdolfo Suárez Madrid-Barajas babhalise elona nani liphezulu labakhweli ngenyanga kaFebruwari nge-4.149.648, emele ukwanda nge-5,9% xa kuthelekiswa kwinyanga enye ka-2018. Bayalandelwa nguJosep Tarradellas Barcelona-El Prat, ngama-3.268.339 (+7,7, 1.125.524% ngaphezulu) ; IGran Canaria, ine-1.052.194 (akukho mahluko xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo); IMalaga-Costa del Sol, ine-9,2 (+ 953.642%); I-Tenerife South, kunye nama-2,7 (+ 896.042%); IPalma de Mallorca, enama-14,6 (+ 782.565%); UAlicante-Elche, onama-9,9 (+ 552.120%) kunye noCesar Manrique-Lanzarote, kunye nama-0,9 (+ XNUMX%).
Ezi datha zaseburhulumenteni zibonisa ukuba kwiinyanga ezimbini zokuqala zonyaka, ukugcwala kwabakhweli kukhule nge-6,7% kwaye babalelwa kuma-32.842.032 abakhweli Izikhululo zeenqwelo moya kwinethiwekhi yeAena. Ukuba, njengoko kusengqiqweni, iinyanga zasehlotyeni xa ezi ntshukumo zazomelele ngakumbi kwizikhululo zeenqwelo moya zaseSpain. Zombini ngokhenketho lwasekhaya kwaye oluvela kwamanye amazwe. Ngeepesenti ezithile, ezithi ziqiniseke kakhulu, ziphantsi kancinci kunalezo zibalwe kwiminyaka edlulileyo. Tune namanye amazwe asirhangqileyo.
Ukusebenza kwizikhululo zeenqwelo moya
Ngokumalunga nenani lokusebenza, i-154.259 iyonke yenziwa kwinethiwekhi yesikhululo senqwelomoya iAena ngoFebruwari ukuhamba kweenqwelo-moya, 8,6% ngaphezulu kunakwinyanga enye yonyaka ongaphambili. Isikhululo seenqwelomoya esirekhode elona nani liphezulu leentshukumo yayinguAdolfo Suárez Madrid-Barajas, enama-30.187 (+ 3,8%), elandelwa nguJosep Tarradellas Barcelona-El Prat, inenqwelo moya ezingama-22.696 (+ 6,3%); IGran Canaria, ine-10.361 (-0,4%); IMalaga-Costa del Sol, ine-8.140 (+ 6,1%); IPalma de Mallorca, kunye ne-7.934 (+ 10%); I-Tenerife South, ene-5.975 (+ 4,2%) kunye neAlicante-Elche, ene-5.645 (+ 9%).
Ngelixa kwelinye icala, kufunyaniswe ukuba kwisithuba esihlalutyiweyo, ngeenyanga zikaJanuwari nangoFebruwari 2019 inani lomsebenzi lonyuke nge-8,3% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lika-2018 nenani leenqwelo moya ezingama-313.817 kwiseti yeenqwelo moya Inethiwekhi yeAena. Ngelixa okokugqibela, kugqityiwe kwezi datha zaseburhulumenteni ukuba iitoni ezingama-78.390 zeempahla zathuthwa ngeli xesha, oko kuguqulela ekunyukeni kwe-5,9% xa kuthelekiswa noFebruwari 2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ukuhamba komoya kuyanda eSpain: kulungile kumaxabiso abakhenkethi